Great Hor Kham PLC. | Creatingabetter life
Great Hor Kham PLC.
Message from the Managind Director
Message from the Legal Advisor
2016 AGM Presentation
TWIN Industry Limited
Hor-Tech Company Limited
Roles and Responsibility of BOD
Role of BOD's Chairman
Role of Management Board
Environmental responsibilities policy
Corporate Governance and Risk Management Committee
Agreement to worker
ပူးပေါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှု နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
ပူးပေါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှု နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ
This article is created or updated on January 9, 2018
ကုမ္ပဏီ၏ ပူးပေါင်း စီမံ အုပ်ချုပ်မှု စနစ် ပြီးပြည့်စုံစေရန်၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု မူဝါဒ အတိုင်း လုပ်ငန်း လည်ပတ်မှု နှင့် စီမံကိန်း တစ်ခုခု၏ ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်နိုင်ခြေများ၊ အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်ခြေများကို ဖော်ထုတ်ပေးပြီး ပြဿနာများ ကျော်လွှား နိုင်မည့် ဗျူဟာများကို ချမှတ် ပေးနိုင်ရန် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့မှ အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သည့် ဤပူးပေါင်း စီမံ အုပ်ချုပ်မှု နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းတို့မှာ -
၁) စိုင်းထွန်းမြင့် - ကော်မတီ အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ
၂) စိုင်းအုန်းမြင့် - ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၃) နန်းနွမ်ဆိုင်ယိင်း - ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၄) စိုင်းသန်းထွန်း - ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် တို့ဖြစ်သည်။
ပူးပေါင်း စီမံအုပ်ချုပ်မှု နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီသည် ၃-လ တစ်ကြိမ် ပုံမှန် အစည်းအဝေး ရှိပြီး ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့မှ ပေးအပ်သော အောက်ပါ တာဝန် ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။
၁။ ကောင်းမွန်သော ပူးပေါင်း စီမံအုပ်ချုပ်မှု စနစ်အတွက် မူဝါဒများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို ပြုစုပြီး ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့အား အတည်ပြုရန် အဆိုပြု တင်ပြခြင်း၊
၂။ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ အတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ရှိမရှိ သုံးသပ် ကြီးကြပ်ခြင်း၊
၃။ မူဝါဒ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းနှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ ထိရောက်မှုကို သုံးသပ်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာမှ အကောင်းဆုံး လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ၊ ပြင်ပ ပညာရှင်များမှ အကြံဉာဏ်များ ရယူပြီး ကုမ္ပဏီ၏ ပူးပေါင်း စီမံအုပ်ချုပ်မှု စနစ် ပိုမို ကောင်းမွန် ထိရောက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
၄။ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ တိုးတက် အောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီများ၏ ပူးပေါင်း စီမံအုပ်ချုပ်မှု စနစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး မိမိတို့ ပြုပြင်သင့်သည့် အချက်များကို ပြုပြင်ရန် အဆိုပြုခြင်း၊
၅။ ကောင်းမွန်သော ပူးပေါင်း စီမံအုပ်ချုပ်မှု စနစ် အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့ နှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့ တို့အား အကြံပြုခြင်း၊ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
၆။ ပူးပေါင်း စီမံအုပ်ချုပ်မှု စနစ်နှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ တွင် အစု ရှယ်ယာရှင်များအား ဖော်ပြခြင်း၊
၇။ သင့်လျော်သော အခြား လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု
၁။ ကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု မူဘောင် နှင့် မူဝါဒများ ပြုစုသတ်မှတ်ပြီး ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့သို့ တင်ပြ အတည်ပြုချက် ရယူခြင်း၊
၂။ လုပ်ငန်း လည်ပတ်မှု နှင့် စီမံကိန်းများတွင် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ အခြေအနေများကို စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဥပဒေရေး စသည့် ရှုထောင့် အဘက်ဘက်မှ ထည့်တွက် သုံးသပ်ပြီး ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့အား အကြံပြုခြင်း၊
၃။ ကုမ္ပဏီ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ လုံခြုံရေး နှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း စသည်တို့တွင် ဖြစ်လာနိုင်မည့် အခက်အခဲ ပြဿနာများကို ကာကွယ် တားဆီးနိုင်ရန်၊ အခက်အခဲ နှင့် ဆုံးရှုံးမှုများ လျော့ပါးနိုင်ရန် အခြေအနေ နှင့် ဗျူဟာများကို ဖန်တီးခြင်း၊ အကြံပြုခြင်း၊
၄။ သင့်လျော်သော အခြား လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
+95 (0)82 52-266
No. KL-15, Union Main Road,
Kaung Mu Loi Quarter, Muse,
Shan State, Myanmar.
GHK Facebook Page